OR Support whilst claiming asylum | Refugee Info Bus
Koolugaltummaa UK keessatti gaafachuu ilaalchisee odeeffannoo qabatamaa
Adeemsi koolugaltummaa kee osoo ilaallammaa jiruu iddoo jireenyaa.
2. Afgaafii calalii – gargaarsi akka si barbaachisu ilaaluu
3. Gargaarsi si barbaachisuun isaa yoo mirkanaa'e 'iddoo jireenyaa isa
duraa' si galchu
4. Gargaarsaaf iyyachuu
5. Gara iddoo jireenyaa dhaabbata si geessu fi gargaarsa mallaqaa siif
6. Iyyannaa koolugaltummaf murtii dabarsuu
Iddoo qubannaa isa duraa
Yeroo konlugaltummaaf iyyattetti Mana yeroo muraasa keessa turtu
Woliigalatti torbaan 3-4
Hoosteelii - kan namoota woliin keessa galtu
Kan tajajia guutuu, kan tajaajila wolakkaa ykn kan guutuun guututti uf tajaajiltu
Iddoo jireenyaa dhabbataa
Iddoo jirenyaa yeroo dheeraa kan hanga murtiin koolugaltummaa kee isa dhumaa kennamuuf keessa jiraattu.
Koolugaltoonni ulaagalee kaahaman yoo guutan gargaarsa idoo qubannaa fi mallaqaa ni argatu. Ulaagaalee kunis:
Iyyannaan koolugaltummaa ammas akn ilaallamaaru yoo ta'e
Madaala gargaarai siif barbaachisuu isaa ittiin beekkamu darbuu, kunis iddoo qubannaa fi gargaarsi mallaqaa sii fi namoota sirratti irkataniif kan barbaachisu ta'uu akka hin qabne yoo mirkanaa'e.
Iyyannaa koolugaltummaa kee yeroo itti gaafachuun sirraa eeggamutti yoo gaafatte ( daangaa biyya seenteetti ykn UK erga seentee guyyaa sadi keessatti)
Gargaarsi iddoo qubannaa fi mallaqaa siif godhamu akka itti fufuuf ulagaalee guutuun sirra jiru:
Gara iddoo itti ergamtee hordofuun deemuu (fakkeenyaaf, gara iddoo qubannaa isa biraa akka deemtuuf gaafatamuu malta)
Teesdumma siif eeyyamame qofa keessa jiraachuu
Seerota iddoo qubanna kabajuu fi hordofuu
Iddoo mallattoo ykn gabaasa kan angaawaan immigireeshiinii kaahe hordofuu
Ajaja dhihaachuu ykn waamicha Hoom Oofisii kabajuu (fakkeenyaaf, afgaafii irratti argamuu, koolugaltummaa keef odeeffannoo dabalataa dhiheessuu)
Iddoo jireenyaa (qubannaa)
Kan yeroo gabaaabaa fi kan yeroo dheeraaf keessa turtu filannoo keetiin alatti siif kennama. Kana jechuun iddoo jiraattu ati filachuu hin dandeessuu.
Maatiidhaaf iddoo qubanna kan ufii isaaniiti uf itti gargaarantu kennamaaf. Kunis mana fincaanii fi iddoo nyaata itti bilcheessan kan qabuudha.
Namoonni qeenxeen, cimdiin ykn kanneen daa'imman hin qabne iddoo qubannaa woliinii keessa galu. Manneen tokkon tokkoon isaanii iddoo nyaata itti bilcheessan, mana qulqullinaa, gabatee irbaataa fi minjaala, meeshalee qulqullinaa f eeggumsa daaimman kun yoo kan jiru ta'eedha. Guyyaa jalqabaa fooxaa fi huccuun halkanii ni kennama.
Boba'aa, bishaan fi tirikni iddio qubannaa keessatt ni argamu. Kafaltii hin qabu.
Gargaarsa mallaqaa (Sekshiin 95 sappoort)
Gargaarsi mallaqaa dhuunfatti namootaaf kennamu ykn miseensa maatiif kennamu torbaanitti £37.75 dha. Malaqichis kan kennamu torbaan torbaanin karaa Hoom Oofisii dhaan kaardii irrattii gala (Aspen Card jedhama). Kaardiin kunis mallaqa maashina keessa baafachuu dabalatee iddoo daldalaa kamittuu meeshaan bituuf hojiirra oola.
Haala murtaawa muraasa kewssatti gargaarsa mallaqaa dabalataa argachuu dandeetta:
Ulfa yoo taate torbanitti dabalataan £ ni argatta.
Yoo ulfa taate dabalataan gargaarsa yeroo tokkoo £300 ni argatta. Kana argachuufis yeroo dahumsaa torbaan saddeet dura fi erga deettee booda torbaa 6 keessatti iyyachuu qabda. Dabalataanis daa'imni kee kan dhalate biyya UK osoo hin seenin yoo ta'ee fi ji'a 3 gad yoo ta'e gargaarsa kanaaf iyyachuu ni dandeetta.
If you are pregnant you are entitled to an extra £3 per week
Gargaarsa dabalataa kan yeroo ulfaa kana argachuufis xalayaa GP ykn ogeessa hordoffii ulfaa irraa barraahe ykn woraqaa ragaa B1 (Kan GP fi ogeessa hordoffii ulfaatiin kennamu) gara Hoom Oofisii erguuti sirra jira.
Daa'imman umurii 1 gadii kan qabdu yoo ta'e torbaaniin £5 ni argatta.
Dabalataanis daa'ima woggaa tokkoo hanga sadii qabda yoo ta'e torbaaniin £3 ni argatta
Gargaarsa dabalataa kan daa'immanii argachuudhaaf gara Hoom Oofisii woraqaa ragaa dhalootaa ykn ragaa guyyaa dhalootaa ibsu kan biraa dhiyeessuu qabda.
Gaaffilee irra deddeebidhaan gaafataman
G: Iddoo jiradhu filachuu danda'aa?
D: Lakki. Iddoo jiraachuu filachuu hin dandeettu. Ulaagaa murtaahaa (qaama miidhamaa) yoo taate kan ilaallamu ta'a.
G: Miseensota maatiidhaaf gargaarsa gaafachuu danda'aa?
D: Eeyye. Kanneen kanaa gadiitiif gaafachuu ni dandeetta:
Kanneen sirratti maxxanan (haadha manaa fi inoollee umurii 18 gadii)
Miseensota maatii kan sitti firooma qaban kan woggaa 18 gadii kan yoo xiqqaate ji'oota 6 darbaniif si wojjiin jiraata turan.
Ga'eessota umurii 18 olii kanneen qaama hirdhuu ta'an.
G: Gargaarsa dabalataa kan mootummaa kan biraa argachuu danda'aa?
D: Lakki. Koolugaltoonni woliigalatti gargaarsa biraa argachuu hin danda'an
G: Gargaarsa eeggumsa fayyaa kan bilisaa argachuu danda'aa?
D: Eyye. Koolugaltoonni dhimma baqattummaa isaanii ilaallamutti jiru ykn ol iyyatanii murtii eeggachaaran tajaajila fayyaa isa duraa fi isa lammataa NHS irraa kafaltii malee ni argatu. Akka waldhaanamaa dhaabbataa hin ta'iinitti galmaahuu qabda. Dhimmi koolugaltummaa kee (ol iyyannoon) kan si jalaa kufe yoo ta'e tajaajila fayyaa yeroo muddamaa qofa kan argattu ta'a.
G: Tajaajila hordoffii haadholii argachuu danda'aa?
D: Koolugaltoonni yeroo hunda atjaajila hordoffii fayyaa haadholii NHS irraa ni argatu. Kunis kan ta'u:
Koolugaltummaaf kan iyyattee fi murtii eeggachutti kan jirtu yoo ta'e
Eeyyama jireenyaa baqataa yoo siif kenname
Gargaarsa mallaqaa kan baqataa kan fudhachutti jirtu yoo ta'e
Q: Hojii argachuu danda'aa?
A: Lakki. Koolugaltoonni akka hojii hojjatamuuf kan eeyyamamu murtiin koolugaltummaa isaanii dogongora abbaa dhimmichaatiin alatti osoo hin murtoofne woggaa tokkoo ol kan ture yoo ta'eedha. Sana booda eeyyama dalagaa argachuudhaf gara dhaabbata dhimma daangaa biyya UK iyyachuu qabu.
Q: Iddoo qubannaa kan hin barbaanne yoo ta'e gargaarsa mallaqaa argachuu danda'aa?
A: Eeyyee. Gargaarsi akka si barbaachisu madaala kaahameen yoo ilaallamee murtaahe haa ta'uu garuu iddoo jiraattu kan qabdu yoo ta'e, gargaarsa mallaqaaf iyyachuu dandeetta.
Q: Iyyanna koolugaltummaa kiyyaaf murtiin yoo darbe maaltu uumama?
A: Iyyannoon kee yoo kufe, biyya UK gad lakkiftee bahuuf haal-duree xumuruu qabda. Mirgi gargaarsa argachuu kee erga murtiin dabree guyyoota 21 keessatti addaan ni cita. Haa ta'uu malee daa'imman sirratti irkatanii jiraatan kan jitan yoo ta'e gargaarsichi kan itti fufu ta'a. Maatiin fedhiidhaan biyya gad lakkisee hin bahu yoo ta'e gargaarsichi kan adda citu ta'a.
Iyyanni koolugaltummaa kee yoo diddaa argate mormachuu ni dandeetta. Hanga murtiin ol iyyannaa kee murtaahutti gargaarsa mallaqaa fi iddoo qubannaa argachuu kan itti fuftu ta'a.
Iyyanni koolugaltummaa kee kan fudhatama argate yoo ta'e, gargaarsi koolugaltummaa guyyoota 28 keessatti kan addaan citu ta'a. San booda dalagaa barbaadachuu, gargaarsa mallaqaa kanneen biraaf iyyachuu fi mana dhuunfaa barbaadachuutu sirraa eeggama.